Dagaal qaraar oo ka socda Muqdisho
Farxiyo Cali Qaajo,
Magaalada Muqdisho waxay soo martay dagaallo aad u qaraar, laakin sannadahan wey nabdooneyd ilaa iyo xad
Waxaa soo kordhaya qasaaraha ay gaysanayaan dagaallada ka soconaya degmooyinka C/casiis iyo Shibbis ayadoo haatanna uu dagaalku ku fidayo degmooyin kale.
Dagaalkii shalay ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan labaatan ruux oo isugu jira kooxaha dagaallamaya iyo dad ay rasaas habaw ahi dishay.
Wararka laga helayo xarumaha caafimaadka ayaa sheegaya in uu soo gaaray afar iyo laabantankii saac ee la soo dhaafay dhaawacyo ay tiradoodu gaarayso 70 ruux, sida ay xaqiijiyeen isbitaalada Madiina, Xayaad iyo Kaysanay.
Dadka uu dhaacawa ka soo gaaray dagaalladan ayaa waxay ahaayeen kuwo ku soo dhaawacmay xaafado ka tirsan degmooyinka Shibbis, Cabdulcasiis, Shangaani, Xamar Wayne, Wardhiigley, Kaaraan iyo Yaaqshiid.
Dadka wax ku noqday dagaalka
Dadka dhawaca ah ayaa waxay isugu jiraan malleesiyooyinkii dagaalameyey iyo dad rayid ah oo hubkii waaweynaa oo la isu adeegsanyey iyo rasaata habawga ahiba ay haleeshay, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee isbitaallada, dhaawacyada dadkaas soo gaarayna waxay u badan yihiin kuwo halis ah.
Dagaalkan ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu billowday maalintii Isniinta ahayd, waxaana jiray shalay dadaal ay awadeen odayaal wax garad ah, kaasoo u muuqda mid aanan ilaa hadda shaqaynin ama mira-dhal noqon.
Sababta fididda dagaalka
Faafidda dagaalkan ee deegaannada cusub ayaa warar la isla dhax marayo waxay sheegayaa in dhinacyadii markii hore dagaallamayey ay maalintii shalay ahayd ku soo biireen kooxo kale oo gurmad ahaan ugu yimid.
Waxaa iyana jirta in qoysaskii deggenaa xaafadaha ay dagaalladu saameeyeen iyo kuwa ku dhow-dhowba ay ka qaxayeen guryahooda, iyadoo saaka la arkayey dad u badan haween, carruur iyo waayeel qaxaya, kaddib markii saakay mar kale uu dagaalkii ka dhex billowday kooxihii dagaallamayey, rasaasta la adeegsanayana ay aad u xoog badan tahay.
Doorka hoggaamiyeyaasha dhaqanka
Hoggaamiyaha dhaqanka ee beelaha dagaallamaya, Imaam Maxamuud Imaam Cumar, ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaallamaya in ay xabbada joojiyaan si loo wada hadlo.
Imaamka ayaa intaasi ku daray in uu haatan doonayo in odaayaasha dhaqanka ay ku soo baxaan xaaladdan, isagoo waydiistay in la joojiyo gurmadka labada dhinac ku biiyara ee dagaalka sii xoojinaya.
"Waxaan u sheegayaa kooxaha dagaallamaya in wax faa'iido adduun ama mid aakhiro aanay ku gaareynin dagaal, balse waxa laga dhaxlaa dagaal uu yahay bur-bur iyo barakac iyo naafo," ayuu yiri Imaam Maxamuud.
Ilaa iyo hadda lama sheegin sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dagaalkan inkastoo markii hore lagu sheegay in uu ku billowday si kama' ah.